Raw 17-Methyltest testosterone varotra Mpanamboatra sy mpamatsy - Orinasa
Rao 17-methyltestosterone vovoka (58-18-4)
Oktobra 23, 2018
Ny roapolo 17-Methyltestosterone dia iray amin'ireo steroids tranainy indrindra, izay afaka mitondra ny tsy fisian'ny testosterone amin'ny lehilahy, ary mitondra ny homamiadan'ny vozon'ny vehivavy ao amin'ny vehivavy. Izy io dia miasa amin'ny fiantraikany amin'ny rafitra maro ao amin'ny vatana mba hahafahan'ny vatana mandroso sy miasa araka ny tokony ho izy.
Roahina 17-Methyltestosterone vovoka (58-18-4) video
Rao 17-methyltestosterone vovoka (58-18-4) Description
Ny kofehy 17-Methyltestosterone Rohan dia steroid, orally activeanabolic-androgenic steroid (AAS) izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tsy fahasalaman'ny androgen amin'ny lahy sy ny marika famantarana hafa. Hanesorana ny fahamaotiana amin'ny tovolahy, amin'ny dosia ambany toy ny ampahany ny fitsaboana hormone menopausal amin'ny soritr'aretin'ny menopause, toy ny hafanana marefo, ny osteoporose, ary ny faniriana ara-nofo amin'ny vehivavy, ary ny fitsaboana amin'ny homamiadana.
Ny roapolo 17-Methyltestosterone volo koa dia methylated synthetic androgen agonist receptor with anabolic effects. Ny roapolo 17-Methyltestosterone, ny testosteron mimicking, dia mifandray amin'ny receptors cytosolic androgen, ary ny famindrana nokleary avy amin'ny ligand-receptor aorian'izay dia mitarika ny fampidiran-draharahan'ny androgen valifaty. Ny vokatra avy amin'ny fototarazo dia tompon'andraikitra amin'ny fivoarana ara-dalàna sy ny fampandrosoana ny taovan'ny lahy sy ny vavy ary ny toetran'ny firaisana ara-nofo. Ny mpitsabo koa dia mahatonga ny fihazonana azota, sodium, potassium, phosphorus, ary koa calcium.
Rao 17-methyltestosterone vovoka (58-18-4) Specifications
Product Name Roahina 17-Methyltestosterone vovoka
Anarana simika RU-24400;NSC-9701;17α-Methyltestosterone; 17α-Methylandrost-4-en-17β-ol-3-one
Brand Name Android, Metandren, Fijaliana
molekiolan'ny Formula C20H30O2
molekiolan'ny Wvalo 302.45
mitsonika Point 162-168 ° C (lit.)
Toro-tavy: 383.47 ° C (tombanana)
Ny antsasaky ny biolojia Tokony ho ora 3 (isaky ny ora 2.5-3.5)
Application Ny fampiasana ara-pahasalamana: Ny methyltestosterone dia na ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fahamaotiana amin'ny fahanterana, ny hogogonadisma, ny cryptorchidism, ary ny dysfunile erectile malefaka amin'ny lahy, ary amin'ny dosia ambany mba hijerena ny soritr'aretin'ny menopause (indrindra ho an'ny osteoporose, tselatra mafana, ary hampitombo ny libido sy ny angovo) ny fanaintainana amin'ny tazony sy ny fiterahana, ary ny homamiadana amin'ny vehivavy
Inona ny roah 17-Methyltestosterone vovoka (58-18-4)?
Ny 17-Methyltestosterone, ny endriky ny synthétique testosterone, dia androgen sy anabolic steroid (AAS) fanafody. Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny halatra testosterone ambany amin'ny lehilahy, ny faharetan'ny fahamaotinana amin'ny lahy sy ny vavy, amin'ny dosia ambany amin'ny maha-ampiharina amin'ny fitsaboana hormonina ho an'ny menopause, toy ny hafanana marefo, ny osteoporose, ary ny faniriana ara-nofo amin'ny vehivavy, ary ny fihanaky ny kanseran'ny nono amin'ny vehivavy (1-3). Toy ny fotsy fotsy na fotsy fotsy na vovoka izy io, izay tsy mety levona ao anaty vovon-javatra samihafa, fa tsy voapoizina ao anaty rano. Tokony hanaiky ny fitantanana am-bava izy.
Ny methyltestosterone dia hita voalohany tao amin'ny 1935 ary nampidirina ho ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny 1936. Nofintinina izy io taoriana kelin'ny nahitana ny testosterone, izay iray amin'ireo zava-mahadomelina voalohany nampiasain'ny AAS. Ny 17-Methyltestosterone, ankoatra ny asany ara-pahasalamana, dia azo ampiasaina koa mba hanatsarana ny vatana sy ny fahaiza-manao.
Ahoana ny fomba famokarana XuXX-Methyltestosterone voly (17-58-18)
Ny 17-Methyltestosterone dia mitondra fiantraikany amin'ny alalan'ireo rafitra roa lehibe: fampidirana ny mpandidy androgen (mivantana na amin'ny DHT), ary amin'ny fiovam-pon'ny estradiol sy ny fampidinana ny mpikatroka estrogen sasany.
Ny 17-Methyltestosterone dia afaka miditra ao amin'ny cell cellule lasantsy, mifamatotra amin'ny receptor androgen, na ny fihenana amin'ny 5α-dihydrotestosterone (DHT) amin'ny cytoplasmic enzyme 5α-reductase. Ny DHT dia mamehy kokoa ny mpandoka ny androgen, ary manome hery matanjaka mahery kokoa. Ny T-receptor na ny DHT-receptor complex dia mandrindra ny fiovana ara-drafitra izay mamela azy hiditra ao amin'ny afovoan'ny sela ary mifandray mivantana amin'ny fizotry ny nucleotide voatokana ao amin'ny ADN, izay antsoina hoe hôrean-hormones (HREs). Io dingana io dia mamaritra ny asan'ny transcriptional ny karazana vatana, ary mamokatra ny androgen.
Roahina 17-Methyltestosterone vovoka (58-18-4) Dosage
Ny 17-Methyltestosterone dia apetraka am-bava. Ny dosage atolotra dia miova arakaraka ny taonany, ny firaisana ara-nofo ary ny fitsaboana ny marary. Ny dosage dia novaina araka ny valintenin'ny marary sy ny fisehoan'ny fanehoan-kevitra ratsy. Ny fitsaboana amin'ny toetrandro amin'ny lehilahy androgen dia tsy maintsy mangataka 10 amin'ny 50 mg amin'ny 17-Methyltestosterone isan'andro. Na izany aza, ny vanim-potoanan'ny taona sy ny taolana dia tsy maintsy dinihina na amin'ny famaritana ny doka voalohany sy amin'ny fanitsiana ny doka. Ny dôsina ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fahamaotiana fahana amin'ny ankapobeny dia amin'ny ankapobeny ao ambany, ary mandritra ny fotoana voafetra, ohatra 4 hatramin'ny volana 6. Ho an'ny fitsaboana ny kanseran'ny nono dia ny 17-Methyltestosterone amin'ny vehivavy dia avy amin'ny 50-200 mg isan'andro.
Rao 17-methyltestosterone vovoka (58-18-4) soa
Ny vovobony 17-Methyltestosterone dia afaka manamarina karazana famantarana toy ny hypogonadism, cryptorchidism, faharetan'ny fahamaotiana, ary ny tsy fetezan'ny dysfunction amin'ny lehilahy, ary amin'ny doleviny ambany amin'ny fitsaboana ny menopause (indrindra ho an'ny osteoporose, tselatra mafana, ary hampitombo ny libido sy ny angovo), ny fanaintainan'ny tazomoka and engorgement.
Ao amin'ny vehivavy koa izy io no mitondra ny homamiadan'ny nono, ny fivoahana noho ny fitondrany vohoka, ary ny fampiasana estrogen dia afaka mitondra ny soritr'aretin'ny menopause. Nampiasaina ihany koa izy io niaraka tamin'ny estrogen esterified ho an'ny fitsaboana moderina hatrany amin'ny soritr'aretina vasomotora mafy mifandray amin'ny menopause amin'ny vehivavy.
Ny toro-làlana farany amin'ny methyltestosterone ho an'ny fitomboan'ny taova
Stan, KB, Douglas, SM, Pharmacology nampiasaina, Endocrinology, 2011
Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Ny fatran'ny fitiliana testosterone miozolavola amin'ny fikorontanan'ny plasma ao amin'ny Postmenopausal Women, PubMed Articles, Online, 2002
Rogerio, AL, Menopause sy ny fahanterana, Ny endocrinologie reproductive Yen & Jaffe (fanontana fahafito), 2014
Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Ny fiantraikan'ny 17α-methyltestosterone, Methandrostenolone, ary Nandrolone Decanoate momba ny Cycle Cycle, Physiology and Behavior, 1997
Roila Turinabol (Tbol) (855-19-6)
Rojo testosterone poopy isocaproate (15262-86-9)
Rojo testosterone poids cypionate (58-20-8)
Raw Mesterolone (Proviron) poids (1424-00-6)